Kuprinta Munyori Ruzivo Bhawa reWordPress
Vanyori Vanotyisa Beta ndeyeRarama
Chipiri, January 18, 2011 Svondo, Ndira 19, 2014 Douglas Karr
Chikamu chedu chekuzvarwa patsva chaiuya nechimwe chakasarudzika chimiro chakanangana ne Martech Zone. Kunyangwe ndichidaidza saiti ino blog yangu, Ndinonyatsoda kuti iyo blog ive muunganidzwa wemaonero kubva kune vamwe nyanzvi muindastiri. Dzimwe nguva, ini handibvumirane nezvakanyorwa pano… asi ndinotsigira chokwadi chekuti tese tine maonero akasiyana pane indasitiri. Ini ndinofunga zvakakosha kuti vaverengi varatidzwe kune akasiyana maonero zvakare. Uye zvechokwadi ndinokurudzira munhu wese kuti zviwedzere mune zvakataurwa!
Zvisinei, ini ndinogara ndichitsvaga nzira dzekukurudzira vamwe mabloggi kuti vape. Imwe yemafungiro yasvika pakubudirira nhasi. Stephen Coley, of DK New Media (yedu agency), yakaburitsa yekutanga beta yeAwesome Author plugin!
Kana iwe ukapururudzira pasi pezasi peji redu, unogona mouseover chero wevanyori kuti aone avo bios, zvinongedzo kune avo azvino blog mablog, pamwe nekubatanidza kune yavo yekumba peji. Unogona kupururudzira mukati mevanyori vese uchishandisa miseve yekuruboshwe nekurudyi. Iyo plugin inovakwa nejQuery uye Ajax (WordPress inoenderana), saka haina preload rese remunyori data uye inononoka kudzora peji mutoro
Tiri kutsvaga kuwedzera plugin uye kuwedzera mamwe maficha pamwe neiyo rakasimba reji peji. Ehe, Stephen ari kushanda pane izvi pakati pezvipo zvevatengi saka dzimwe nguva zvinotora nguva yakareba kupfuura zvataizoda! Asi arikuita basa hombe uye plugin rinotaridzika!
Douglas Karr Tuesday, January 18, 2011 Sunday, January 19, 2014
Facebook Yakaremara Akaundi Yangu
Nharembozha Usashevedze maRejista Ari Pedyo
Ndira 23, 2011 na10: 45 PM
Ndinozvida! Uye zvechokwadi ndinoda mufananidzo wekutarisa wawakasarudza. 🙂
Iye zvino wakandikurudzira kuti ndiwedzere zvimwe zvinyorwa kuThe Marketing Tech Blog!